IDM please — MYSTERY ZILLION
November 2008 edited May 2009 in File Request
Internet download manager and it's crack please. I can't download from rapidshare.
nyi nyi htun ရေ
mz download section ထဲမှာ ရှိပါတယ်။
ဒီမှာ link မှာ download လုပ်လိုက်ပါ။
ဒါက idm 5.15 ပါ ။
ကူညီပါအုံးဗျာ...အပေါ်က ပုံအတိုင်းဖြစ်နေတယ်...ဒီလိုဗျ..ကျနော် IDM ကို Firefox add-ons အနေနဲ့သုံးနေပါတယ်ဗျာ...update လဲဆွဲလို့ရတယ်ဗျ...5.8 ထိရတယ်...ဒီနေမှဖြစ်တာပါ။အနော်ကိုကူညီကြအုံးဗျ.......အဲဒီ ကွက်လပ်ထဲဘာထဲရမလဲဗျာ....
Mr.Ring wrote: »
ဖြစ်မှာပေါ့ Crack လုပ်ထားတဲ့ Program ကို Update လုပ်မှတော့ ပြန်ဖြစ်မှာပဲ။ IDM ကိုတစ်ခါ Crack လုပ်ပြီးရင် နောက်ထပ် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် နောက်ထပ် version ကို ခိုးရာပါပစ္စည်းရသလို မဟုတ်ရင်မလုပ်နဲ့။ သူကတော့ Update အသစ်ထွက်တိုင်း Update လုပ်မှာလားမေးမှာပဲ သွားမလုပ်နဲ့ ကိုယ်ကအကြံအဖန်နဲ့ယူထားတာ:D သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်လည်း ဒီလိုပဲ Update လုပ်မှာလားမေးရင် မလုပ်ဘူးလို့ပဲပြောလို့မှာထားတယ် နောက်မကြာပါဘူး ငါ့ကို Register လုပ်ခိုင်းနေပြန်ပြီဆိုပြီးလာပြီ မင်း Update လုပ်လိုက်တယ်မဟုတ်လားဆိုရင် မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီး မုန်လာဥကလုပ်သေးတယ်။:D
ဖြစ်မှာပေါ့ Crack လုပ်ထားတဲ့ Program ကို Update လုပ်မှတော့ ပြန်ဖြစ်မှာပဲ။ IDM ကိုတစ်ခါ Crack လုပ်ပြီးရင် နောက်ထပ် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် နောက်ထပ် version ကို ခိုးရာပါပစ္စည်းရသလို မဟုတ်ရင်မလုပ်နဲ့။ သူကတော့ Update အသစ်ထွက်တိုင်း Update လုပ်မှာလားမေးမှာပဲ သွားမလုပ်နဲ့ ကိုယ်ကအကြံအဖန်နဲ့ယူထားတာ:D သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်လည်း ဒီလိုပဲ Update လုပ်မှာလားမေးရင် မလုပ်ဘူးလို့ပဲပြောလို့မှာထားတယ် နောက်မကြာပါဘူး ငါ့ကို Register လုပ်ခိုင်းနေပြန်ပြီဆိုပြီးလာပြီ မင်း Update လုပ်လိုက်တယ်မဟုတ်လားဆိုရင် မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီး မုန်လာဥကလုပ်သေးတယ်။
အခုလို update လုပ်ရင် အဲဒီလိုဖြစ်တယ် ဆိုတာပြောတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ။အနော် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဘဲမေးထားပါတယ်။ မုန်လာဥ မလုပ်ပါဘူး။အဲဒီအတွက်လဲ ကျနော် အကူအညီးတောင်းတာပါ။ကျနော်ကတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဘဲပြောတတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ် ကျနော် သုံးတဲ့ software မှန်သမျှ အားလုံး အကြံအဖန် တွေချည်းပါဘဲ...တော်ပြီး လိုတာဘဲပြောတော့မယ်....
ဒီအတွက် ကို exiter နဲ့ ကို kyawmin ကျန်တဲ့ မန်းဘာတွေခင်ဗျာ...အဲဒီကွက်လပ်ထဲ ဘာဖြည့်ရမလဲဗျာ...တစ်ချက်လောက် ကူညီပါဗျာ....ကျနော်အခု ဘာမှ ဆွဲလို့မရတော့လို့ပါ....
အစ်ကိုက update သွားလုပ်လိုက်တာဆိုတော့ IDM ကို uninstall လုပ်ပြီး reinstall လုပ်လိုက်ပါ ။
အဲဒါလည်းမသေချာဘူး ။uninstaller ကောင်းကောင်းနဲ့ uninstall လုပ်ရင်တော့ reinstall လုပ်ရင်
တော့ပြန်အလုပ်လုပ် နိူင်ပါတယ်။ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းစက်မှာလည်း အဲလိုဖြစ်ဖူးတယ် ။ နောက်
ဆုံး net version ကို install လိုက်မှအဆင်ပြေသွားတယ် ။ ကျွန်တော်ပြောသလို့အရင်လုပ်ကြည့်ပါ ။
မရဘူးဆိုရင် အခုကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့ version ကို install ပါ ။ IDM 5.15 bulid6final ပါ ။
အခုမှပြန်ဖတ်မိတာက မနေ့ကလေရှည်လိုက်တာနဲ့ ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ မပြောလိုက်မိဘူး။:D Reinstall မလုပ်လည်းရတယ် IDM.exe ကို နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ Crack လုပ်လိုက်ရင် ရတယ်။:D
Crack တွေ keygen တွေ Update တွေနဲ့ ရှုပ်နေတာပဲဗျာ..။
ကျွန်တော်လည်း အရင်က ဒီလို IDM နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒုက္ခရောက်ဖူးပါတယ်..။
Internet Download Manager 5.15 version Silent Installation ကိုသုံးနေပါတယ်..။
Silent Installation ဆိုတာက file ကို download ဆွဲလိုက်ရင် IDM logo လေးနဲ့ ဖိုင်တစ်ဖိုင်ကျလာပါလိမ့်မယ်..။ အဲ့ file ပေါ်ကို DOUBLE CLICK နှိပ်လိုက်ပါ..။နောက်ပြီး ခဏလောက်စောင့်...ဆယ်စက္ကန့်လောက်ကြာရင် IDM က သင့် စက်ထဲမှာ Install လုပ်ပြီးသွားဖြစ်သွားတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်..။ No registration, No keygen, No serials, No more annoyce! )
နောက်တစ်ခုကတော့ Portable Internet Download Manager 5.15 ပါ..။ သွားလေရာကို memory stick ထဲထည့်ထားရုံနဲ့ သယ်သွားလို့ရပြီး စက်တိုင်းမှာ installation မလိုပဲ သုံးလို့ရပါတယ်...။ :67:
အပေါ်က file တွေကို စိတ်၀င်စားလို့ download လုပ်ချင်ရင်တော့ :39:
Internet Download Manager Silent Installation 5.15 :6:
Internet Download Manager portable 5.15 :6:
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းစက်မှာ နောက်တစ်ခါပြန်ပြီး crack တယ် ။ အဲဒါလည်းမရဘူး ။ ဒါနဲ့ uninstall လုပ်ပြီး
reinstall လုပ်တာလည်းမရဘူး ၊ အဲဒါကြောင့်နောက်ဆုံး build6version ကိုပြောင်းတင်လိုက်မှအဆင်ပြေ
သွားလို့ပါ ကိုလူပျိုကြီးရေ ....:)
kyawmin ၊ လူပျိုကြီး နဲ့ kaungkimpyar123 ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျနော် ဒေါင်းပြီး သုံးနေပါပြီ။ကျေးဇူးပါ။
IDM latest version 5.16.3.full.waxe
ကို သံလုံငယ်ရဲ့Blog မှာ IDM 5.16 (နောက်ဆုံး Version) ကို Down လို ့ရပါတယ်။ သူက Patch File ပါတင်ပေးထားပြီးသား။ license နဲ ့မဟုတ်တော့ register ပြန်လုပ်စရာမလို၀ူး။ အိုစကေ ဘဲ
ifile.it ကနေ တင်ပေးပါလား
htaymyint wrote: »
ဒါလေးလဲမဆိုးဘူးဗျ... Add on ဆိုတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ သုံးလို့ကောင်းပါတယ်..... မြေခွေးသမားတွေ အတွက်ပါ.....
Your can download for this problem...
ရဲ့ Key gen သို့မဟုတ် licence လိုချင်လို့ပါ:5:
Internet Download Manager v5.17_Portable နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းပါ .. ဒီမှာ download လုပ်နိုင်ပါတယ် ..ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ဒေါင်းနိုင်ကြပါစေ..
Here IDM 5.17 build3with keygen ,patch :67: